Nyocha - NYE Countdown.com
Lelee nyocha anyị!
kwadoro site na Facebook
Ezigbo DJ Drops & Ọrụ Ndị Ahịa !!!
Ha bụ aka ọrụ na oge nnabata. Naanị ụlọ ọrụ dị egwu iji soro.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ọkachamara na ogo dara ada ??? Nke a bụ ụlọ ahịa nkwụsị gị !!! ha bu oku !!!
nye ha nwayo nwayo ihe na oge izipu dikwa nma!
Ana m akwado NYE Countdown dara, enwere m obi abụọ maka iji ọrụ ahụ mana ha masịrị m kpamkpam. Akwụ ụgwọ maka otu... (1) bute ma nwee mmiri mmiri abụọ (2). Toro ogologo site na Jamaica.GỤKWUO
super ngwa ngwa tụgharịa oge na-edo onwe ha n'okpuru ihe ị chọrọ na ihe ha na-eme dị ịtụnanya !!!! ka mma mgbe ahụ ka m chere... ọ ga-adị. Emere m bushe dj ahụ wee pụta dị ka m tụrụ anya mana ọ ka mma. daalụ ụmụ nwoke ọhụụ gị Dj Milo! nnukwu ihe metụtara mmadụ niileGỤKWUO
ezigbo ntụgharị, ọnụ ahịa dị mma na ụda dị mma
Igosi nma kachasi nma, odi nma ka o me nke gi
Ajọ mmiri dara na ha nyere m otu n'efu na-enweghị m rịọ maka ya. M ga-alọghachite ebe a maka ihe ndị ọzọ... odi nso.GỤKWUO
Ọ B F Ọ B DR Ọ B ONL ỌR.. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ezigbo ọfụma, ndapụta, karịa idepụta ha ebe a. Guysmụ okorobịa ndị a... bụ ezigbo ego.GỤKWUO
daalụ imere ezigbo ọrụ na dj dajụọ m. Aga m alaghachite maka nrịfu mmiri ọzọ.
Kpamkpam ịkwado.! Akwụ m otu ụgwọ ma ha ejiri ihe abụọ kwụ ọtọ. Ha wekwara oge iziga m... ederede kemgbe m na-enyochaghi email m ka echetara m maka iwu m. Ọ dị mma n'ezie ma nwee ekele dị ukwuu. Daalụ, n’ihi na n’oge a ka ihe a dị anyị mkpa. Nlekọta ibe anyị na igosi ụfọdụ ịhụnanya.GỤKWUO
Edebere m ntụpọ ole na ole, gịnịkwa ka m ga-ekwu, Ewoo! Nnukwu Nkwukọrịta, site na nzaghachi otu ahụ... ajuju m tupu m nye iwu, wee rue nnyefe ... na nsonaazụ ikpeazụ m na-efugharị, Storm Bennett rụrụ ọrụ dị ịtụnanya, enwetara m ọtụtụ karịa ka m tụrụ anya !!! NYE A Kọrọ Ngụ NYE! m ga - abụrịrị onye ahịa ga - alaghachi! - Daalụ Otu !!GỤKWUO
NYE nwere ọdịda kachasị mma, kacha mma kachasị mma na ọrụ ọkachamara. Aga m esoro ha azụmaahịa .. ọzọ
Smụnna m tienụ mkpu. Achọrọ m ihe ọsọ ọsọ ma ndị otu gị nyeere m aka n'ụzọ ọrụ aka. Responded zara... ngwa ngwa na ntopute ahụ bịara ngwa ngwa. M ga-alaghachi n'ezie! Daalụ ọzọGỤKWUO
Ngụkọta NYE bụ onye isi ụlọ ọrụ maka ebumnuche. Naanị ihe kachasị mma!
Ọnụ ọgụgụ kachasị mma n'ụwa. Egbu egbu oge obula!
Kemgbe afọ ise, esorola NYE gburịtara nsogbu, ha anaghị emechu ihu. Ememe NYE ọzọ na-eme nke ọma na... akwụkwọ maka m… ga-agbadokwa aka ọzọ n’ọdịniihu. Daalụ Storm na Jasmin!GỤKWUO
egwu di egwu. Oke mmiri gafere
Anyị ji ya maka ụlọ ọrụ anyị n'afọ a ma ọ dị ịtụnanya! Ihe niile rụrụ ọrụ nke ọma.
NYE Ngụkọta nwere usoro ngụkọ zuru oke m chọrọ ka emezie ihe omume ahụ n'ọkwa ọzọ. Anata m ọtụtụ... Ekele maka emume ahụ. Iwu ịtụ bụ ọsọ ma dịkwa mfe ma enwetara m njikọ nbudata n'oge na-adịghị anya karịa ka m chere. Site na iji ọrụ dị ka nke ahụ, enwere m ike ịghọta ihe mere ha ji aga ụlọ ọrụ maka ndị na-enweghị atụ! Daalụ maka nnukwu ngwaahịa! Ana m atụ anya ọnụọgụ afọ ọzọ! - DJ IanGỤKWUO
N'afọ nke atọ m na-eji NYE Countdown na ọkacha mmasị mgbe niile.
Ihe dị egwu na-eme ka ndị na-ege gị ntị nọrọ na mbara ikuku maka ngụkọta NYE ọ bụla. 3 Onye ọrụ afọ ga-abụ... azụ maka 4th na 2018/2019.GỤKWUO
Dị nnọọ ka m nye nnweta nke ukwuu nke ukwuu egwu. enweghị ike ị chere ime ya ọzọ na njedebe nke afọ dị ka ọkachamara Video DJ maka karịrị... 10years m ukwuu ịkwado nke a.GỤKWUO
Nwere ike nweta ọnụ ọgụgụ site n'ọtụtụ ebe, mana ndị a bụ ihe kachasị mma!